Prof. U Khin Maung Win – Healthy Life Journal
Prof. U Khin Maung Win
ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)
Posts By Prof. U Khin Maung Win
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အသည်းအဆီဖုံးခြင်းက မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါသလား ဆရာ။ A. အသည်းအဆီဖုံးတာက မျိုးရိုးလိုက်ပါတယ်။ အသည်းအဆီဖုံးဖို့ မျိုးရိုးဗီဇ (Gene) တွေရှိရင် ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ “ မြန်မာပြည်မှာတော့ အလွယ်ဆုံးနည်းပြောလိုက်ရင် အာထရာဆောင်းရိုက်တာပဲ။...
—–၊ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဆိုးဆေးပါတဲ့ အစားအသောက်တွေစားရင် အသည်းကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မှန်ပါသလားဆရာ။ A. ဆိုးဆေးမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Edible dye ဆိုတဲ့ စားလို့ရတဲ့ဆိုးဆေးနဲ့ Chemical dye...
#HealthyLifeJournal လတ်တလောတွင် ရန်ကုန်မြို့ကို ဖြန့်ဝေလျက် ရှိသော ဂျိုးဖြူရေပိုက်လိုင်းတွင် မစင်များ ပြန့်ပွားနေသည်ဆိုသည့် စကားကြောင့် ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူ ပြည်သားများ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၆-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ ညနေ (၄:၃၀) နာရီတွင်...
မြန်မာလူမျိုးအများစုကြားရှိသည့် အသည်းရောဂါဆိုင်ရာ အယူအဆမှားများ
ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း – အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုးကနေ စီပိုး ဖြစ်သွားတတ်တယ် ဒါကလည်း လူအတော်များများကြားမှာ တွေ့နေရတဲ့ အယူအဆမှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘီပိုးကနေ စီပိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ – ပန်းသီးစားရင် ဘီပိုးကူးတယ် ဒါကလည်း ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလွှင့်လိုက်သလဲ...
အသည်းရောင် အသားဝါ အေရောဂါ ကာကွယ်ဆေး . .
မေး။ အသည်းရောင်အသားဝါ အေရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါသလား ဆရာ။ ကြူကြူ ၊ လှိုင် ။ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ အသည်းရောင် အသားဝါ အေရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ဘာမှ စစ်စရာမလိုဘဲ အခုတစ်လုံးထိုး၊ နောင်ခြောက်လကြာရင် တစ်လုံးထိုး...
တစ်နေ့ ၃၀ မိနစ် အချိန်ပေးပြီး လုပ်သင့်သော ကျန်းမာရေးအကျင့်ကောင်း
ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း(အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) လူတွေ အချိန်မရဘူးဆိုရင် ကျန်းမာဖို့ တစ်နေ့ နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးပြီး လုပ်သင့်တာက လမ်းလျှောက်တာပါပဲ။ လေ့ကျင့်တဲ့စက်တွေဝယ်ပြီး ဒီစက်ကြီးနဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်၊ ဟိုလိုလုပ်မယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းမှာ မလုပ်ဖြစ်ကြတာ များတယ်။ နောက်တစ်ခုက မနက်စောစောကန်ဘောင်မှာ လမ်းလျှောက်ပြီး ဆီပူထဲနှစ်ထားတဲ့ ဘူးသီးကြော်တွေစားပြီး ပြန်လာတယ်ဆိုရင်လည်း...